Recipe yengulube, wabhaka kuhhavini. Tasty, ukunconywa kanye ecebile kilojoule
Ingulube - umkhiqizo lulwimi siphelile, okuzokwenza lo "hot" isidlo eqotho nokunomsoco. Kodwa esikhathini lapho chops abavamile zazibhekwa uju, sesivele sidlulile. Ngakho-ke, ngo-ukupheka ntandokazi yesimanje elicwengisiswe futhi izitsha eyindida kuyokushiya umangele futhi sijabulise umndeni. Leli phephandaba uhlongoza eziningi zokupheka ukuthi uzokwenza yiliphi Omuny ithebula ongenakulibaleka.
Sinikeza okusheshayo samaholide iresiphi yengulube, wabhaka kuhhavini. Uzodinga marinate tenderloin ubusuku nenye garlic, pepper kanye nosawoti. Uma wayefisa, engeza ezihlukahlukene amakhambi Italy. Khona-ke nje gcoba ebusweni inyama nenye inyama omnqumo, uju kanye soy sauce. Ingulube kumele wabhaka amahora okungenani eyodwa nengxenye at ukushisa low (ngaphansi kuka-190 degrees). isidingo sakhe njalo ukuze aphuzise juice ukuthi drips intando. Inyama Kuyophumela ethubeni namanzi kakhulu futhi elimnandi.
Delicious iresiphi yengulube, wabhaka kuhhavini kuzodinga eside ukupheka. Ucezu inyama encane (500 gr.) Ingabe kufanele nisike, kodwa akazange afinyelele ukuphela, bagcobe nge sauce soy, uju kanye pepper phezu bonke ubuso. Shiya isikhathi esithile marinate ke. Manje-ke sekuzoba kungenzeka ukusika ukugxusha: utamatisi imibuthano, tincetu ushizi kanye plate garlic. Zonke ukusabalala ne ukusikeka. Ingulube efakwa ukuma, ukuphoqelela amazambane iluhlaza bese uthumela Bhaka kuhhavini osuke usushisa kakade. Amazinga kufanele kube khona abangaphezu kuka-degrees 140. Kodwa kuphela kudingeka uyophuziswa njalo dish uvele juice. Imizuzu eyishumi ngaphambi ukulungele gcoba bonke imayonnaise brown inyama.
Ungashintsha le ndlela bese unikeza iresiphi yengulube, ephekwe ucwecwe. Kulokhu, iqatha lenyama kufanele kube kakhulu kunelawo samuntu kuqala. Ngaphambi ukugoqa ezazigxishwe yengulube in ucwecwe, kuyodingeka ukuba gcoba lwesinaphi. Imizuzu eyishumi ngaphambi kokuphela yokuwugazinga inyama ivulekile ukuvumela uhlobo uqweqwe amahle okumnandi.
Okuvamile iresiphi yengulube, ephekwe eziko, ngeke kube olandelayo. Kuyadingeka ukuba usike inyama zibe yizicucu amancane, Fry it ne anyanisi kanye izaqathi ogayiwe. Khona-ke thumela zonke kuhhavini, ethekwini nenye amaqanda, imayonnaise, ushizi kanye dill oqoshiwe. Lokhu omelet eqotho angapheka for isigamu sehora, simenze kwasekuseni ukhilimu omuncu.
Ungase futhi unikele iresiphi ezisheshayo yengulube, wabhaka kuhhavini ngesiFulentshi. Ukuze wenze lokhu, usike Batter inyama mncane kakhulu futhi ibekwe bhaka. Manje, i-usawoti kancane futhi amafutha omnqumo gcoba. Ngokulandelayo, usike anyanisi kakhulu fake, utamatisi ehlutshiwe oqoshiwe zibe cubes, futhi ushizi is wagcoba on a grater indawo. Zonke izithako hlanganise imayonnaise uwafake phezu inyama. Dish obhakwe kuhhavini osuke usushisa kakade imizuzu engamashumi amane ezingeni lokushisa 190 degrees.
Kakhulu okunama-kilojoule amaningi Indlela ingulube nge amazambane. Ukuze ekuwulungiseleleni kuyodingeka uthathe izingcezu inyama lide kakhulu, gazinga kancane kakhulu anyanisi nesweli olwembiza. Amazambane uthathe amakota, azihlanganise imayonnaise, onion rings nesweli olwembiza. Zonke izithako afakwa emikhonweni wokubhaka, ukupheka cishe isigamu sehora. Phaka no isaladi okuxubile.
Amnandi okusheshayo intando chops nge amaqanda "eyindoda." Kuyadingeka ukwenza inyama chops, bona cishe Fry kuze kuphekwe, engeza usawoti kanye pepper. Baking amafutha amafutha kancane, wafaka tincetu anyanisi, inyama kuso bese efakwa kuhhavini osuke usushisa kakade amaminithi ayishumi 190 degrees. Khona-ke ucezu ngalunye uthele iqanda, usawoti. Kuzoba ngokwanele cishe imizuzu emihlanu isidlo flavorful kakhulu futhi kwanelise ukupheka.
Indlela ukupheka unyaluthi iphalishi e multivarka ubisi, ithanga, omisiwe nokudoba?
Indlela ukupheka inhlama for the amadombolo?
Indlela Fry okusheshayo isitshalo seqanda futhi esihlwabusayo? zokupheka
Currants baphotha ushukela - esiphundu futhi unempilo
Cherry jam imbewu: iresiphi zakudala nezincazelo zayo ezihlukahlukene
Recipe yemvu kebab
Vumela utamatisi ukuthambisa kuyoba luningi, okungajwayelekile futhi okunembile
Izinzuzo izici online shopping
Yini okufanele bakwazi ukukwenza futhi wezingane?
Izinhlobo anti-theft izinhlelo for izikhungo commercial ezinhlobo ezehlukene
Hlukanisa imenyu ukudla
Ukuqubuka entanyeni ingane
Vinnitsa: Fountain. Ukudansa imithombo. Ukucula Fountain e Vinnitsa
Three Amakhona Palmyra kuyona 4 * (Egypt / Sharm El Sheikh): izibuyekezo, izithombe
Izithelo cocktail. Indlela ukunqoba kule umshini?
Ukuzisika Ofanele izinhlanzi kuncike zinhlobo
Ukuze uthole ukwaziswa mayelana nendlela ikhule okwesihlanu
Turkey a sauce alube. Ungadliwa for ehlukahlukene nososo